तराईमा “रमिते” मन्त्री-नेताहरूको घुइँचो, मन्त्री आए आकाशबाटै फर्किए भन्दै बाढीपीडितको गुनासो ! – Idea Khabar
तराईमा “रमिते” मन्त्री-नेताहरूको घुइँचो, मन्त्री आए आकाशबाटै फर्किए भन्दै बाढीपीडितको गुनासो !
आइडिया खबर२०७६ श्रावण २, बिहीबार ०९:३१
रौतहट, साउन ०२ । लगातारको वर्षापछि डुबानबाट आक्रान्त बनेको तराईमा मन्त्री र नेताहरूको घुइँचो लागेको छ । निरीक्षणका नाममा दैनिक हेलिकोप्टरबाट पुगेका नेताहरू राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै फर्किने गरेका छन् । बुधबारमात्र दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित चार बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्री एंव सांसदले हवाई र स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । प्रभावितसँग भेटवार्ता र तिनको समस्या सुन्न भन्दा पनि हवाई निरीक्षण गरी जिल्लाका सबै निकायलाई सेनाको ब्यारेकमा बोलाएर निर्देशन दिँदै फर्किएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, ऊर्जा तथा जलश्रोतमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वमन्त्री प्रभु साह, संसदीय विकास समितिकी संयोजक कल्याणी खड्का लगायतको टोलीले बाढीले गरेको क्षति र बाढीपछिको अवस्था बुझ्न बुधबार रौहतटको सदरमुकाम गौर आएका हुन् । काँग्रेस सभापति देउवा भने पार्टीको बेग्लै टोली लिएर केही ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गर्न पुगेका थिए ।
मन्त्रीहरूको टोली भने हेलिकप्टरबाट आएर गौरको पुरेनवास्थित सेनाको गणमा स्थानीय प्रशासनसँग क्षति र बाढीको अवस्था बुझेर फर्किएका हुन् । राजधानीबाट सेनाको हेलिकप्टर लिई आएको मन्त्रीहरूको टोली हवाई निरीक्षण गर्दै पुरेनवास्थित इन्द्र बक्स गणमा ओर्लिएको थियो ।
मन्त्रीहरूको टोली आउने भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक अनिल झा लगायतका जिल्लाका नेताहरू पनि गौरमा रहेको नेपाली सेनाको इन्द्रबक्स गण पुगेका थिए । हेलिकप्टरबाट रौतहटको अवस्था बुझ्न आएको सो टोलीले रौतहटका सुरक्षा अधिकारी तथा नेताहरूलाई त्यहाँ बोलाएका थिए ।
उनीहरूले हेलिकप्टरबाट ओर्लनासाथ सामूहिक तस्बिर खिचाएका थिए । त्यसपछि सेनाको गणभित्र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित सरोकारवाला निकायका प्रमुखलाई बोलाएर बाढी र डुबानबाट भएको क्षतिको जानकारी र विवरण लिएका थिए । मन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले वस्तु अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सो क्रममा उनले सांसद विकास कोषको रकम जथाभावी बाटोमा खर्च गरेका कारण पानीको निकास राम्रोसँग हुन नसकेपछि डुबानमा परेको बताए । प्रजिअले जानकारी गराउँदै गर्दा राजपाका संयोजक झा भने जंगिएका थिए । उनले कुन सांसदको रकम कहाँ दुरुपयोग भयो भनेर प्रतिवाद गरे । उपस्थित मन्त्रीहरूले भने केवल सुनिरहे ।
निरीक्षणकै क्रममा जनकपुर पुगेका गृहमन्त्री थापाले नेपालतर्फकै बाँधले गर्दा डुबानमा परेको बताए । ‘सीमामा भारतले बाँधरूपी बाटो बनाएका कारण नेपाली भू–भाग डुबानमा परेको खबर आएपछि हामीले भारतसँग कुराकानी गर्यौँ,’ बाढी प्रभावित क्षेत्रको हेलिकप्टर निरीक्षणपछि जनकपुर विमानस्थलमा बिफ्रिङ गर्दै गृहमन्त्री थापाले भने,‘त्यो(भारत) बाँधले समस्या नल्याएको देखियो । हामीतिर ठिक ढंगले तटबन्धन नगरेकाले डुबानमा परेको हो ।’
उनले खोला–नदीको बाँधलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्री थापाले विपद्को वेला तत्कालै उद्धार, राहत र अन्य कामका लागि पहाड र तराईमा हेलिकप्टरको बन्दोबस्त मिलाउने सरकारको सोच रहेको बताए । बाढीबाट स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले बताए । मन्त्री यादवले झाडापखाला, हैजा जस्ता सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न र महामारी फैलन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रलायले तयारी गरेको बताए ।
यता, बाढी र डुबानबाट पीडित भएकाहरूले भने मन्त्रीहरू निरीक्षणमा आएको सुनिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मन्त्रीहरू आए र आकाशबाटै फर्किए । हाम्रो दुख र दर्द कसले सम्झने खै’, पीडितहरूको गुनासो थियो । उनीहरूलाई अहिले मुख्यगरी खानेपानी र खाद्य सामग्रीको आवश्यकता रहेको छ ।
अमेरिका र युरोपिएनको चपेटामा नेपाल, लुट्ने काममा सबै एक
२०७६ असार ३, मंगलवार १४:४७
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य २ रूपैयाँ घट्यो
२०७६ भाद्र २४, मंगलवार १४:००
२०७६ श्रावण २८, मंगलवार ११:५५
जम्मू कश्मीर विधानसभामा अनुसूचित जातिलाई आरक्षण
२०७६ श्रावण २१, मंगलवार १२:५९
सर्वोच्चलाई अटेर गर्दा उपत्यकामा डुबान
२०७६ असार ३०, सोमबार ०९:१२
आजको बिदेशी मुद्राको बिनिमयदर
२०७६ श्रावण २८, मंगलवार ०८:३३